‘भारतीय सुरक्षाकर्मीले मध्यराति ट्र्याक्टरमा हालेर जंगलमा छाडिदिए’- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
सीमा क्षेत्रमा बन्दुक तेर्स्याउँदै भने, ‘यताबाट भाग, फर्कियौ भने गोलीले उडाइदिन्छु’
चैत्र २०, २०७६ कलेन्द्र सेजुवाल
सुर्खेत — चार दिनसम्म के खानु भो त ? कान्तिपुरको प्रश्नमा उनी एकछिन मौन बसे र झोलाबाट ‘पार्ले जी’ बिस्कुटको खोल झिक्दै भने, ‘यो खायौं, थोकै (थोरै) चाउचाउ पनि थियो ।’
जुम्लाको हिमा गाउँपालिका–५, बाँझघाटका ५१ वर्षीय सार्की रोकाया बिहीबार निकै थकित थिए किनभने उनको जिन्दगीमा पछिल्लो चार दिनको यात्रा निकै पीडादायी बन्यो । भारतको अम्बेडकर नगरबाट कतै गाडी त कतै पैदल यात्रा गर्दै बिहीबार सुर्खेत आइपुगेका उनले भने, ‘पराइ–देश (भारत) बाट यसरी बाँचेर आइएला भन्ने सोचिएकै थिइनँ ।’
गाउँका अन्य चार जनासँगै आएका उनले घटनाको बेलिविस्तार लगाए । फागुन दोस्रो साता उनीसहित गाउँकै सौंरे रोकाया, विकास रोकाया र दुर्ग रावत उत्तर प्रदेशको अम्बेडकर नगर पुगेका थिए । गर्मी सिजनका लागि पातलो कपडा डुलाउँदै बेच्न उनीहरू वर्षेनि यसैगरी अम्बेडकर नगर जाने गर्छन् । यसपटक सहरमा डेरा खोजेर बस्न थालेको करिब एक महिना भएको थियो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण भारतभर ‘लकडाउन’ भयो । त्यसपछि व्यापार ठप्प ! चार–पाँच दिन डेराभित्रै थुनिएर बस्नुपर्‍यो । सोमबार एक्कासि भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर भन्न थाले, ‘तिमीहरू आ–आफ्नो भूमि जाओ, नत्र ठिक हुन्न ।’ उनीहरूले डेरामा व्यापारको लागि ल्याएका सामानसमेत राम्ररी थन्काउन पाएनन् । दिउँसो करिब १२ बजेतिर सरकारी गाडीमा खाँदेर बहराइच हुँदै रुपैडियाका लागि पठाइयो । ‘गाडीमा मान्छे भरिभराउ थिए, भारतीय पनि थिए,’ ३२ वर्षीय सौंरेले भने, ‘भोलिपल्ट (मंगलबार) बिहान अँध्यारैमा रुपैडिया उतार्‍यो ।’
रुपैडिया बसपार्कमा त्यसैगरी ल्याइएका उनीजस्ता करिब डेढ सय नेपाली थिए । भारतीय भूमि नै भए पनि सीमा क्षेत्रमा आएकाले अब त घर पुगिएला भन्ने विश्वासले सबै उत्साही थिए । तर, दिनभर नेपाल सरकारले न त उनीहरूलाई बोलायो न नाका प्रवेशका लागि अनुमति नै दियो । बिहानको खाना, दिउँसोको खाजा र साँझको खाना भने भारतीय सुरक्षाकर्मीले दिए ।
मंगलबार साँझको खानासमेत खाएपछि सबै भोलि (बुधबार) बिहानको प्रतीक्षामा थिए तर मध्यराति भारतीय सुरक्षाकर्मीले ट्र्याक्टरमा चढ्न उर्दी जारी गरे । त्यहाँसम्म पनि उनीहरूलाई लागेका थियो– रुपैडिया नाकाबाट नेपाल पठाउन खोजिएको होला ।
‘तर हामीलाई ट्र्याक्टरमा हालेर जंगलैजंगलको बाटो लगियो, त्यसपछि त कतै मार्ने हुन् कि भनेर डर लाग्न थाल्यो,’ सौंरेले भने, ‘एक घण्टापछि ट्र्याक्टर रोकेर बन्दुक देखाउँदै ‘यताबाट भाग, फर्कियौ भने गोलीले उडाइदिन्छु’ भने ।
मध्यराति खेत र झाडीमा भागदौड गर्दै नेपालपट्टि आएको उनले बताए । उनका अनुसार उक्त राति ५–६ पटक गरेर नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमा छाडिएको थियो । एकपटकमा करिब २० जनालाई खाँदेर राखिएको उनले बताए ।
भारतले अमानवीय रूपमा धपाएर नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरूले झन् सास्ती पाए । रातभरि हिँडेका उनीहरू बिहान करिब १० बजे पिप्रहवा प्रहरी चौकी पुगे । ‘हामीले आत्मसमर्पण गरेजस्तै हात खडा गरेर प्रहरीलाई व्यथा सुनायौं,’ उनले भने, ‘प्रहरीले पनि तिमीहरूको घर जहाँ हो, त्यतै जाऊ भन्दै कोहलपुरतिर पठायो ।’
कोहलपुर पुग्दा बुधबार दिउँसोको करिब १२ बजेको थियो । त्यहाँको प्रहरीले सुर्खेततिर आउँदै गरेको एउटा गाडीमा चढायो । त्यो गाडीले वीरेन्द्रनगर नल्याएर छिन्चुमै छोड्यो । त्यसपछि फेरि उनीहरूको पैदल यात्रा सुरु भयो । ‘हिजो (बुधबार) दिनभर हिँडेर यता आयौं, बजार (वीरेन्द्रनगर) पुग्न सकिएन, बाटोमै बास बस्यौं,’ ४४ वर्षीय नन्दलालले भने, ‘आज बिहान मात्र आइपुगेका हौं ।’
पाँचै जनालाई नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको खुलामञ्चस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टनको कमाण्ड सम्हालिरहेका नेपाली सेनाका क्याप्टेन दयाराम ढकालले सबै जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अवस्था सामान्य रहेको बताए । उनीहरूलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य निगरानी गरिने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा झन् पीडा
चार दिनको यात्रापछि उनीहरूलाई भारतभन्दा आफ्नै सरकारप्रति बढी गुनासो छ । ‘भारतले त आफ्नै देश जाऊ भनेर खेद्यो, नेपाल आएपछि पनि सरकारले वास्ता गरेन,’ सौंरेले भने, ‘हाम्रो सरकार राम्रो भइदिएको भए रुपैडिया आएको थाहा पाउनेबित्तिकै गाडी पठाएर ल्याउँथ्यो तर नेपाल आएपछि पनि आफ्नै घर जाउ भन्दै दुःख दिन खोजियो ।’
सीमा कटेपछि बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा गरेर करिब सात–आठ ठाउँमा प्रहरीले रोकेर सोधपुछ गरे पनि क्वारेन्टाइनको सट्टा घरतिर जान भनेको उनले बताए । उनका अनुसार सँगै आएका गाउँकै सात जना कोहलपुरमा आफन्तकोमा बसिरहेका भए पनि अरु कहाँ गए अत्तोपत्तो छैन ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १८:११
फूटबल प्रशिक्षक गौचनको नेपाल र जापानको कोभिड–१९ भोगाइ
‘हामीलाई घरको चिन्ता, घरकालाई हाम्रो’
चैत्र २०, २०७६ विनोद पाण्डे
काठमाडौँ — कोभिड–१९ महामारीको त्रास सर्वत्र फैलिइरहेका बेला नेपाल आएर जापान फर्केका फुटबल प्रशिक्षक वसन्त गौचन भन्छन्, ‘सरकारले बनाएको नियमलाई जापानी जनताले राम्ररी पालना गरेका छन् ।
केही बन्द गरिएको छैन, कम्पनीले कामदारलाई काममा नआऊ भनेको छैन ।’
काठमाडौं– प्रशिक्षण नियमित चलिरहेको थियो । बुधबारको प्रशिक्षण भने अन्योल थियो । जापानको टोकियोस्थित सेतागयास्थित फन रुट्स एकेडेमीका फुटबल प्रशिक्षक वसन्त गौचनको अघिल्लो दिनदेखि मनमा खुलदुली चलिरहेको थियो ।
कोभिड १९ को संक्रमणले विश्व डगमगाएको छ । जापान त्यसबाट अछुतो छैन । फन रुट्सको चिन्ता भने कोभिड–१९ को त्रास नभई मौसमका कारण थियो । फन रुट्सको एकेडेमी भएको क्षेत्रमा बुधबार बिहानदेखि वर्षा हुने अनुमान गरिएको थियो । सामान्य वर्षा भयो तर त्यसले बिहान ८ देखि ३ बजेसम्मको प्रशिक्षणलाई बाधा पुर्‍याउन सकेन ।
एक समय नेपाली फुटबलका ‘गोल्डेन ब्वाई’ गौचन तीन वर्षदेखि फन रुट्स एकेडेमीको प्रशिक्षक छन् । टोकियो कोभिड–१९ को त्रासबाट गुज्रिरहे पनि एकेडेमीले प्रशिक्षण जारी राखेको छ । फन रुट्सको मुख्य प्रशिक्षण बन्द रहे पनि गौचनले एकेडेमीमा १२ वर्ष मुनिका बच्चालाई अतिरिक्त क्रियाकलाप गराइरहेका छन् ।
‘सबै गतिविधि शून्यजस्तो भएका बेला बच्चालाई स्वस्थ रहन, सक्रिय रहन र दिमागलाई चुस्त बनाउन अतिरिक्त क्रियाकलापका रूपमा प्रशिक्षण गराउन अभिभावकहरू नै सक्रिय हुन्छन्,’ गौचनले टोकियोबाट जानकारी गराए ।
चीनबाट फैलिएको कोभिड–१९ ले जापानलाई छोप्दै गर्दा गौचन नेपाल आएका थिए । एसियाली फुटबल महासंघको ‘ए’ लाइसेन्स कोचिङ कोर्स गर्न आउँदा झन्डै तीन साता यहाँ बिताएका उनीसँग जापान र नेपाल दुवैतिरको कोभिड–१९ को त्रासको अनुभव छ । टोकियोमा जनजीवन कष्टकर भइरहेको अवस्थामा फागुन १२ गते नेपाल आउँदा उनले काठमाडौंमा त्यसको प्रभाव देखेनन् । ‘खासै मास्क लगाएको मान्छे मैले देखेको थिइनँ, जता गयो भीडभाड मात्र देखिन्थ्यो । कोभिड–१९ बारे कोही सचेत भएको जस्तो देखिँदैनथ्यो,’ उनले भने ।
उनी जापान फर्किने बेला भने नेपालमै कोभिड–१९ को त्रास बढिसकेको थियो । फ्लाइट पनि उड्ने निश्चित थिएन । उनी जापान पुगेको एकदुई दिनमै फ्लाइट बन्द हुन पुग्यो । अर्थात् नेपालमा कोभिड–१९ रोकथामको पहल अलि ढिलै भयो । ‘कोभिड–१९ को महामारी फैलन थाल्दा जापानमा पनि सामान्य अवस्था थियो । फ्लाइट जारी थियो । विदेशीको आउजाउ भइरहेको थियो । अहिले पूरै फ्लाइट बन्द छ,’ गौचनले भने, ‘तर स्थिति सामान्यझैं देखिन्छ । डिस्निल्यान्ड, ठूला पार्कहरू बन्द छन् तर नेपालजसरी पूरै बन्द छैन ।’
चीनको छेउमा भए पनि जापानले कोभिड–१९ राम्रोसँग नियन्त्रण गरेको उनलाई लाग्छ । जापानमा ५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई हजार तीन सयभन्दा बढी संक्रमित छन् । बिहीबार मात्र जापानले संक्रमित सूचीमा ४३ जनाको नाम थपेको थियो । पद्धतिमा चलेकाले जापानले महामारीलाई नियत्रण गरिरहेको उनको बुझाइ छ ।
‘सरकारले बनाएको नियमलाई यहाँका जनताले राम्ररी पालना गर्छन्, सरकारले केही बन्द गरेको छैन, कम्पनीले पनि कामदारलाई काममा नआऊ भनेको छैन । शनिबार र आइतबार छुट्टीको दिन सरकारले घरबाट ननिस्किनू भनेको थियो, खासै कोही निस्किएनन् । सोमबार फेरि काम सुरु हुन्छ,’ गौचनले भने, ‘सरकारले नाइट क्लब नजाऊ, भीडभाडमा नबस भनेको छ, सबैले मानेका छन् ।’
गौचनका अनुसार अहिले स्कुल मात्र बन्द छ । अप्रिलभर स्कुल बन्द हुने सम्भावना छ । टोकियोले जुलाई–अगस्टमा आयोजना गर्न लागेको ओलम्पिक एक वर्षका लागि सरिसकेको छ । टोकियोमा रहेका नेपाली सबै ठीकै रहेको सूचना उनीसँग छ । ‘महामारीले छोला भनेर काम बिदामा लिएर बस्ने पनि छन् । यो बेला नेपालीबीच भेटघाट भएको देखिएको छैन । घुम्न गएको पनि पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी समाचार संस्थाले कोभिड–१९ बाट बच्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ । टोकियोका मेयर आफैंले सम्बोधन गरिरहेका हुन्छन् । जनताले त्यसैलाई पालना गर्छन् ।
हात धुन्छन्, कुला गर्छन् । बाहिरबाट आएपछि लगाएको कपडा पूरै परिवर्तन गरेर नुहाउँछन् ।’
संक्रमितको संख्या अझै बढ्यो भने काम बन्द हुन सक्ने गौचनको आकलन छ । त्रासमै भए पनि बच्चाहरूलाई प्रशिक्षण जारी छ । ‘बच्चाहरूलाई डर त छ, सेनिटाइजरको अधिक प्रयोग गर्छन् र फुटबल पनि पुछेर खेल्छन् । १२ वर्षमुनिका बच्चाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी के हो बुझेका हुन्छन्,’ उनले भने ।
गौचनको प्रयासमा विगत तीन वर्षदेखि उनको गृहनगर पोखराबाट टिम छनोट गरी यू–१२ टोलीलाई जापानमा लगेर खेलाउने गरिएको थियो । यस वर्षदेखि नेपालको यू–१२ टोली बनाएर जापान लाने तयारी थियो । तर कोभिड–१९ को त्रास फैलिएकाले टोकियोमा मार्च तेस्रो साता हुने कोपा तोरे कप स्थगित भएको छ । कोपा तोरेमा नेपालसहित बोरुसिया डर्टमुन्ड, हर्था बर्लिन, एट्लेटिको म्याड्रिड, स्पोर्टिङ लिज्बन, मार्से, पाल्मेराज, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवानका यू–१२ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका थिए ।
गौचन बिहीबार नियमित तालिकामै थिए । फन रुट्समा बिहीबार उनको ‘ओपन डे’ थियो । फन रुट्समा आबद्ध हुने बच्चाहरूलाई ओपन डेमा प्रशिक्षण गराएर भर्ना लिइन्छ ।
गौचनको ध्यान भने नेपालतिरै छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा प्रकोप बढिरहेको छ भनिएको छ । आमा पोखरामा हुनुहुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ । आमा भने जापानमा अझै ठूलो प्रकोप छ भनेर यताको चिन्ता लिनुहुन्छ ।’
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १८:०९